Cthulhu को कल: एचपी लवक्राफ्टको ब्रह्माण्डिक आतंक | वर्तमान साहित्य
Cthulhu को कल
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, कथाहरू, आतंक
Cthulhu को कल -कथुहुको कल, अ --्ग्रेजीमा - अमेरिकी लेखक एचपी लभक्राफ्टको मास्टरपिस हो। १ 1928 २ in मा प्रकाशित यस कथाले तथाकथित "चतुर्थु मिथकको साहित्यिक चक्र" सुरु भयो, यो ब्रह्माण्डिक त्रासको कथा र उपन्यासहरूको श्रृंखला हो। यो पुरानो बाहिरी प्राणीसँग सम्बन्धित कथाहरूको समूह हो जुन ग्रहलाई पुनः कब्जा गर्न फर्कन्छ वा ब्यूँझन्छ।
समकालीन अमेरिकी संस्कृतिमा चतुल्हूको फिगरको पछिल्लो प्रासंगिकता निर्विवाद छ।: पुस्तकहरू, बोर्ड खेलहरू, कॉमिक्स, अडियोभिजुअल सर्टहरू, फिचर फिल्महरू, भिडियो गेमहरू ... अब, डरलाग्दो अस्तित्वको सबैभन्दा धेरै संख्या स music्गीतमा देखा पर्‍यो, (मेटलिका वा आइरन मेडेन जस्ता विश्व-प्रसिद्ध ब्यान्डहरूको गीतहरूमा, उदाहरणका लागि)।
1 Cthulhu को कल सारांश
1.1 मुख्य पृष्ठ
1.2 कम राहतमा ईन्ग्मा
1.3 पहिलो पांडुलिपि
1.6 दुःस्वप्न शहर
2.1.1 उहाँको सबैभन्दा प्रसिद्ध कामहरू
3 पछि साहित्य र कलामा चतुल्हूको प्रभाव
3.1 केही लेखकहरू जसले Cthulhu लाई संकेत गरे
3.2 हास्य र हास्य
3.3 सातौं कला
3.4.1 धातु ब्यान्ड
3.4.2 साइकेडेलिक रक र ब्लू कलाकारहरू
3.4.3 आर्केस्ट्राल संगीत रचनाकारहरू
3.5 भिडियो खेलहरू
4 "Lovecraftian सुत्र" को आलोचना
सारांश Cthulhu को कल
जाडो १ 1926 २1927 - १ XNUMX २।। फ्रान्सिस वेल्याण्ड थर्सन, बोस्टनका प्रतिष्ठित नागरिक, उसको ठूलो काकाको मृत्युको खबर छ, जर्ज जी एन्जेल। पछिल्लो थियो भाषाहरूको प्रख्यात प्रोफेसर सेमिटिक ब्राउन विश्वविद्यालयबाट। मृत्युको सन्दर्भमा त्यहाँ दुई संस्करणहरू छन्: आधिकारिक एक, कार्डियक अरेस्टको कारण भयो जुन शिक्षक डकको नजिक र्याम्प चढ्दै थिए।
यसको सट्टामा, दोस्रो संस्करण (केही साक्षीहरूबाट) ले कालो व्यक्तिले प्रोफेसरलाई ढलानमा धकेल्छ भनेर देखाउँदछ। उनको मात्र उत्तराधिकारी हुन, थर्सनले एन्जलबाट सबै खोजी कागजातहरू र व्यक्तिगत सामानहरू प्राप्त गर्दछ। ग्रंथहरू र सामानहरू मध्ये, त्यहाँ हाइरोग्लिफिक-जस्ता शिलालेखहरू सहित आयताकार मूर्तिकला सहित एक अनौंठा बक्स छ।
Cthulhu को कल ...
कम राहतमा ईन्ग्मा
फ्रान्सिसले मूर्तिकलालाई टेन्टेकलमा मुकुट लगाएको र केही गडबड मोनोलिथिक वास्तुकलाले घेरिएको एउटा राक्षसी प्राणीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेको रूपमा व्याख्या गर्छ। त्यस्तै, बक्स मा अखबार क्लिपिंग्स छन्; ती मध्ये एक "Cthulhu को पंथ" को कुरा गर्दछ। लिखित समाचारको साथ दुई नामहरू बारम्बार देखा पर्दछ: हेन्री एन्थोनी विल्कोक्स र जोन रेमंड लेरासे।
विल्कोक्स रोड आइलैंड स्कूल अफ फाइन आर्ट्सका एक विलक्षण विद्यार्थी थिए जसले मार्च १ 1925 २XNUMX मा प्रोफेसर एन्जललाई (अझै ताजा) आयताकार मूर्तिकला देखाए। प्रशिक्षुले तर्क गरे कि त्यो कुख्यात शहर उदास शहरको थियो दर्शन बाट उत्पन्न भयो काईमा ढाकिएको भव्य विशाल मोनोलिथहरूको। साथै, हेन्रीले "चतुल्हू फाटगन" सन्देश सुनेको दावी गरे।
एन्जलले विल्कोक्ससँग उनका सबै भेटहरूको लिखित रेकर्ड राखे। यस बीच विद्यार्थी धेरै दिनको लागि एक अनौंठो ज्वरोको प्रलोभनबाट ग्रस्त थियो पछि अस्थायी अम्नेशियाको साथ। जे भए पनि, प्राध्यापकले अनुसन्धान जारी राखे; एक सर्वेक्षणमार्फत पत्ता लगाइयो कि हेन्रीको ट्रान्स अन्य कवीहरू र कलाकारहरूको समान दृश्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ।
थप रूपमा, प्रेस क्लिपिंगले सामूहिक त्रास र आत्महत्याहरूको एपिसोड देखायो विश्वको विभिन्न भागहरूमा जुन एक साथ विल्कोक्सको भ्रामक अवधिको साथ भयो। त्यस्तै गरी, सेनेटोरियममा प्रायः बिरामीहरूले "मतिभ्रम" अनुभव गरे जुन विशाल टेंटेंकलले भरिएको राक्षस र एक रहस्यमय शहरको विशेषता रहेको थियो।
एन्जलको अर्को पाण्डुलिपि १ years बर्षको हो र Legrasse को बारे मा कुरा। यो एक पुलिस निरीक्षक थिए जो लुइसियाना शहरमा महिला र बच्चाहरूको रहस्यमय बेपत्ता पार्ने अनुसन्धानमा संलग्न थिए। साथै, जासूस यो देखिन्छ कि च्थुलहु कल्ट्सको प्रत्यक्षदर्शी भएको छ (परिक्षणको एक विधान थियो यी मध्ये कुनै एक संस्कारमा संकलन गरियो)।
१ 1908 ०XNUMX सेन्ट लुइस पुरातात्विक सम्मेलन, जासूसले मूर्ति पहिचान गर्नका लागि बिभिन्न विशेषज्ञहरुलाई सहयोग पुर्‍यायो। केवल अन्वेषक र मानवशास्त्रविद् विलियम वेबले ग्रीनल्याण्डको पश्चिमी तटमा त्यस्तै केही देखेको दाबी गरे। यी घटनाहरू १ 1860० मा भएको थियो, जब वेबले खैरो व्यवहारको साथ खैरो एस्किमोसको गोत्रको सामना गर्‍यो।
"पुरानो कास्ट्रो" लेरासेको टोलीले १ 1907 ०। मा न्यू ओर्लिन्समा पक्राऊ परेका थिए जब उनको मानव बलिदान पनि समावेश थियो। क्यास्ट्रो र अन्य कैदीहरूले उक्त मूर्तिलाई “प्रधान पुजारी चतुल्हू,” भनेर चिनाए। एक अन्तराष्ट्रिय इकाई "जब तारा प्रोफेसिटी थिए।"
त्यसपछि, अपहरणकारीहरूले तिनीहरूको गीत अनुवाद गरे - एस्केमोसको वाक्यांशको साथ विशेष: "रिलेहमा उसको घरमा, मृत चतुल्हू सपना हेर्दै कुर्दैछन्"। दोस्रो पाण्डुलिपि पढिसकेपछि, थर्सनले बुझे कि उनका काकाको मृत्यु कुनै दुर्घटना थिएन। यसै कारणले, उसले आफ्नै जीवनको लागि डराउँछ, किनभने "उसलाई पहिले नै धेरै थाहा छ।"
डराएको, फ्रान्सिसले चतुल्हु पंथ अनुसन्धान छोडे (उनले पहिले विल्कोक्स र लेग्रेसेलाई भेटे)। तर एक पत्रकारिता फाइल एक मित्रको घरमा एक प्रतिमाको तस्विर सहित (इन्स्पेक्टर जस्तै) तिनीहरूको षडयन्त्र पुनः जगाउनुहोस्। प्रश्नमा समाचार एक जहाज को मामला सम्बन्धित छ - एम्मा - एक आघात बचेका, गुस्ताफ जोहानसेनको साथ समुद्रमा उद्धार।
निराश नाविक घटनाहरूको विवरण प्रदान गर्न इन्कार गरेको बावजुद, फ्रान्सिसले जोहानसेनको व्यक्तिगत डायरीबाट के भयो पत्ता लगाउँदछ। स्पष्ट रूपमा एमालाई अर्को जहाज, Aler द्वारा आक्रमण गरियो। त्यसपछि पीडितहरू "... रल्याहको शव शहर" को सतहमा जबरजस्ती भागे। त्यहाँ गुस्ताफ र उनका साथीहरूले चतुल्हूको पुनर्जन्म देखे।
गुस्ताफले विशाल जहाजलाई टाउकोमा हिर्काए जब उसले त्यसलाई जहाजमा पुर्यायो। त्यस बेलादेखि, अरु कसैले पनि यस जीवलाई देखेको थाहा छैन। उद्धार भएको केही समयपछि, नाविक संदिग्ध रूपमा मृत भेटियो। फलस्वरूप, थर्सन विश्वास गर्दछन् कि चतुल्हूका अनुयायीहरूले उसलाई मार्ने कोशिस गर्नेछन् किनभने उसलाई सबै कुरा थाहा छ।
अन्ततः, राजीनामा गरिएको फ्रान्सिसले अन्य संसारका संस्थाहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ र प्रश्नहरूको जुन मानव समझभन्दा पर जान्छ। अलविदा भन्नु भन्दा पहिले, थर्सनले भनेका थिए कि शहर र चतुल्हूको राक्षस डुब्नुपर्दछ, अन्यथा, "संसार डरलाग्दो हुँदैछ"। नायकको अन्तिम प्रतिबिम्बले निम्न पढ्दछ:
अन्त कसलाई थाहा छ? अहिले जे उत्पन्न भएको छ, त्यसले डुब्न सक्छ र जे डूब्यो उभरिन सक्छ। घृणित पर्खाइमा र समुद्रको गहिराइमा र शting्का गर्ने मानवीय शहरहरूमा विनाशको तैरिरहन्छ। दिन आउँनेछ, तर मैले सोच्नु हुन्न र लिनु हुँदैन। यदि म यो पाण्डुलिपिबाट बच्न सकेन भने म आफ्ना कार्यकारीहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि उनीहरूको विवेकले उनीहरूको धृष्टता बढाउँछन् र यसलाई अन्य आँखामा नपर्नबाट रोक्छ।
होवार्ड फिलिप्स लभक्राफ्टको जन्म अगस्त २०, १20। ०, प्रोभिडेन्स, रोड आइलैंड, संयुक्त राज्यमा भएको थियो। उनी बुर्जुवा परिवारमा हुर्केका थिए क्लास प्रवृत्तिसँग (धेरै नै मुख्य पूर्वाधार राख्ने आफ्नो आमामा धेरै पूर्वाग्रह)। अनुसार, लेखकले एक उच्च स्तरको विचारधाराको विकास गरे र धेरै पटक आफ्नो जातीयता प्रदर्शन गर्न आए (उनको लेखोटमा प्रस्ट)।
यद्यपि लभक्राफ्टले आफ्नो अधिकांश जीवन आफ्नो गृहनगरमा बिताए, उहाँ १ 1924 २1927 र १ XNUMX २। बीच न्यु योर्कमा बस्नुभयो।। बिग एप्पलमा उनले व्यापारी र एमेच्योर लेखक सोनिया ग्रीनसँग विवाह गरे। तर दुई वर्ष पछि जोडी अलग भयो र लेखक प्रोविडेन्समा फर्किए। त्यहाँ मार्च १ 15, १ 1937 .XNUMX मा सानो आन्द्रामा क्यान्सरको कारण उहाँ मर्नुभयो।
१ 1898 1935 ० र १ XNUMX XNUMX ween बीचमा लभक्राफ्टले छोटो कथा, कथाहरू र उपन्यासहरू बीच 60० भन्दा बढी प्रकाशनहरू पूरा गरे। यद्यपि उनले जीवनमा नाम कमाउन सकेनन्। वास्तवमा, यो १ 1960 .० को हो जब अमेरिकी लेखकले डरावना कथाहरूका निर्माताको रूपमा बदनाम गर्न थाले।
उहाँको सबैभन्दा प्रसिद्ध कामहरू
अर्को समयको छाया
चार्ल्स डेकस्टर वार्ड को मामला
सपना अवरोधको अर्कोपट्टि
अज्ञात कडाथको सपनाहरूमा खोजी
पछि साहित्य र कलामा चतुल्हूको प्रभाव
आजको दिनसम्म, लभक्राफ्टको कार्य पच्चीस भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ र ब्रह्माण्डिक डरावनी फिक्शनमा उनको नाम एक निर्विवाद संदर्भ हो। अरु के छ त, Cthulhu मिथक प्रभावकारीहरूको एक राम्रो संख्या लाई प्रभावित, जो लवक्र्याटको उत्तराधिकार "बचत" गर्दै थिए। तीमध्ये अगस्ट डर्लेथ, क्लार्क एस्टन स्मिथ, रोबर्ट ई। होवार्ड, फ्रिट्ज लेबर र रबर्ट ब्लोच हुन्।
केही लेखकहरू जसले Cthulhu लाई संकेत गरे
रोबर्ट एन्टोन विल्सन
जॉयस क्यारोल ओट्स
हास्य र हास्य
फिलिप ड्रुइलेट, जोसेप मारिया बीए र एलन मूर (तीन जनाले लभक्र्याफ्टियन राक्षसमा आधारित मूल अनुकूलनहरू)
डेनिस ओ नील, कार्टुनिस्ट नौकर (उदाहरणका लागि, अर्खम शहरलाई लाभ्राफ्टले आविष्कार गरेको थियो)।
प्रेतवाधित दरबार (१ 1963 XNUMX), रोजर कोर्मन द्वारा
अर्को संसारबाटको कुरा (१ 1951 XNUMX१), होवार्ड हक्स द्वारा
एलियन: आठौं यात्री (१ 1979।)), रिडले स्कट द्वारा
यो कुरा (१ 1982 XNUMX२), जोन कारपेंटर द्वारा
पुनः एनिमेटर (1985), स्टुअर्ट गोर्डन द्वारा
अन्धकारको सेना (१ 1992 XNUMX २), साम रमी द्वारा
ठाउँ खाली ठाउँ (२०१ 2019), रिचर्ड स्टेनली द्वारा
साइकेडेलिक रक र ब्लू कलाकारहरू
आर्केस्ट्राल संगीत रचनाकारहरू
अन्धकारमा एक्लै, बरफको कैदी y धूमकेतुको छायाInfogames द्वारा।
Cthulhu को कल: पृथ्वीको गाढा कुनाहरूबेथेस्दा सफ्टवर्क्स द्वारा
Cthulhu को कल: आधिकारिक भिडियो खेल (अन्तर्क्रियात्मक अनलाइन भूमिका खेल्ने खेल) साइनाइड स्टूडियो द्वारा।
"Lovecraftian सुत्र" को आलोचना
संसारभरका धेरै विद्वानहरुबाट चित्थुलु मिथकलाई प्रायः साहित्यिक आन्दोलनको रुपमा लिइन्छ। जे होस्, लभक्राफ्ट पनि रचनात्मक शैली प्रयोग गरेकोमा आलोचनाको लक्ष्य भएको छ J उदाहरणका लागि जर्ज लुइस बोर्जेस वा जूलियो कोल्ट्जार जस्ता लेखकहरूसँग - सरल र भविष्यवाणी गर्न सकिने.
यसको बावजुद, केही शिक्षाविद्हरू विचार गर्छन् बालुवा किताब (१ 1975 XNUMX) बोर्जेस द्वारा लभक्राफ्टमा श्रद्धांजलिको रूपमा। तर, अन्य आवाजहरू मा विश्वास गर्दछ कि अर्जेन्टिनी बौद्धिकको वास्तविक अभिप्राय भनेको लभक्र्याफ्टियन सुत्रको मध्यमता प्रदर्शन गर्नु थियो। यसको अंशको लागि, आफ्नो निबन्ध मा रियो डे ला प्लाटामा गथिकका नोटहरू (१ 1975 XNUMX), कोल्ट्जारले लेखकलाई भने अमेरिकी निम्नानुसार:
“लभक्राफ्टको विधि प्राथमिक छ। अलौकिक वा शानदार घटनाहरू हटाउनु अघि, अनावश्यक परिदृश्यको दोहोरिएको र नीरस श्रृंखलामा बिस्तारै पर्दा उठाउन अगाडि बढ्छ, मेटाफिजिकल मिस्टहरू, कुख्यात दलदल, गुफा पौराणिक कथा र जीवहरू डायबोलिकल संसारका धेरै खुट्टाहरूसहित ... "
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कथाहरू » Cthulhu को कल
जियाकोमो लिओपर्दी। उनको जन्मको वार्षिकोत्सव। कविताको चयन
चकलेट को लागी पानी